Etu ị ga-esi jigide ndị ahịa na sọftụwia na - akwụghị ụgwọ | Site na Linux
Etu esi ejigide ndi ahia na ngwanrọ n’efu
Obere ọnwa abụọ gara aga, anyị bidoro n'usoro na-achọ ikuzi Etu ị ga - esi bulite azụmaahịa anyị na sọftụwia na - akwụghị ụgwọIhe niile dabere na ahụmịhe m na ọ nwere ike ọ gaghị adị dabere na ikpe gị. Anyi agbadoro anya ka anyi nwee ike igba ahia, otu ebumnuche anyi kwesiri iru bu - jigide ndị ahịa, gbakwunyere na nke a anyi aghaghi: kee ika, mee ka uru bawanye ma belata mmefu ma ọ bụ mfu.
Iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịaỌ bụ ihe ọ bụla karịa ịmepụta njikọ dị mma na nke na-adịkarị n'etiti ụlọ ọrụ na ndị na-azụ ahịa, ya bụ, njikọ a na-eke mgbe onye na-azụ ahịa zụtara ngwaahịa wee bụrụ onye ahịa ya oge niile, onye na-egosipụta na akara na nke a na-atụ aro.
Emekpala okwu nke ezigbo ndị ahịa na nke obi ụtọ ndị ahịaEbe ọ bụ na nke ikpeazụ a na-ezo aka n'eziokwu bụ na ngwaahịa gị na-ezute ihe onye ahịa chọrọ, mana na onye ahịa ahụ achọghị ịma iji dochie ya na asọmpi ahụ. Iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa na-aga n'ihu, ọ bụ nsonaazụ nke ịgbakwunye afọ ojuju na mmekọrịta ntinye n'etiti ndị na-azụ ahịa na ụlọ ọrụ.
1 Usoro iji jigide ndị ahịa
2 Atụmatụ iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa
2.1 Ebumnuche anyị nwere ike iji na usoro ịkwado ndị ahịa anyị.
3 Ngwaọrụ iji jigide ndị ahịa
3.2 POS / EGO
4 Mkpebi na iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa na ngwanrọ n'efu
Usoro iji jigide ndị ahịa
Usoro nke iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa Ọ dị ezigbo ogologo, na-agbaso njem na-aga: site na ịnwe njirimara ụlọ ọrụ mara mma, site na ahịa na nlekota oru, na ịnwe arụmọrụ iji jikwaa ọrụ azụmahịa anyị.
Akpaaka na ahịa, nlekota oru, ahia na usoro bara uru nke ngwaahịa a bu otu n'ime ụzọ kachasị mma iji jide ndị ahịa anyị.
Anyi aghaghi ido anya na usoro iguzosi ike n'ihe nke ndi ahia, ga-gbakwasara ọ bụghị naanị ijigide ndị ahịa, kama iji dọta ndị ahịa nwere ike karịa ihe niile iji nye mmetụta nke ntụkwasị obi n'etiti ụlọ ọrụ na ndị na-azụ ahịa.
Nsonaazụ nke iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa A gbanwere ya na nke mbụ, na ego a na-enweta ugboro ugboro, kamakwa na nkwa nke ezi ọrụ, aha ọma na asọmpi ahụ yana mmụba nke ndị ahịa ọhụụ n'ihi nkwenye nke ndị ahịa na-eguzosi ike n'ihe.
Atụmatụ iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa
Atụmatụ iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa bụ ihe zuru ebe niile taa, ọtụtụ narị gurus na-emepụta usoro ma ọ bụ atụmatụ nke na-enye ohere ka otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ mepụta njikọ dị mma n'etiti ndị na-azụ ahịa na ụlọ ọrụ. Isi nsogbu dị na nke a bụ na a na-ere ha dị ka usoro anaghị agha agha maka ụdị azụmaahịa ọ bụla, na-ebughi n'uche na ụdị azụmaahịa ọ bụla, ọnọdụ na ndị na-ege ntị lebara anya dị iche.
E kwesịrị ilele atụmatụ iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa anya dị ka ntụaka, ma ọ bụghị mgbe ọ bụla dị ka usoro ndị na-adịghị agha agha.
Ihe kachasị mma bụ iji nyochaa ndị na-ege anyị ntị, nyochaa àgwà anyị na njirimara anyị, nyochaa omume na usoro nke asọmpi ahụ, mụta site na usoro ihe ịga nke ọma etinyere n'otu ụdị azụmahịa ahụ ma ọ bụ nke yiri ya. Site na isi nke ọ bụla n'ihe ndị a, mepụta atụmatụ iguzosi ike n'ihe nke anyị, nke na-enye anyị ohere ịgbanwe ebumnuche azụmahịa anyị gaa na ntụzi aka.
Ọ dị ezigbo mkpa mgbe ị na-eke usoro iguzosi ike n'ihe anyị, na anyị na-elekwasị anya n'ịmepụta mmekọrịta na-adịru oge na ka anyị ghara imehie ihe nke na-ele naanị n'echiche nke ire.
Ebumnuche anyị nwere ike iji na usoro ịkwado ndị ahịa anyị.
Mepụta usoro maka nlebara anya nkeonwe.
Nye ndị ahịa gị ụgwọ (ego, ịzụrụ ihe, ihe onyinye pụrụ iche, ihe ncheta, ...).
Mara ma mụta n'aka ndị ahịa gị dịka i nwere ike, m jiri ozi niile anakọtara iji nye gị ihe ịchọrọ. Echefula na ha bụ ndị mmadụ, ya mere ozi mkpali na ụbọchị ọmụmụ gị nwere ike ime ihe niile dị iche.
Nọgide na-enwe mmekọrịta dị elu karịa ọnụ.
Jikọta ụlọ ọrụ gị n'ụzọ ọ bụla ma hụ ntanetị na ntanetị na-anọghị n'ịntanetị dị ka otu.
Nọgide na-akpọtụrụ ndị ahịa gị, site na netwọk mmekọrịta, ozi ịntanetị ahaziri, ekwentị, wdg.
Ka onye ahịa nye mmuta na aro ha.
Tinye uru na ngwaahịa na ọrụ gị (nkwado agbatị, aha njirimara ahaziri, nsuso, iche ...)
Kewaa ndị ahịa gị ma mepụta ahụmịhe site na ndị na-azụ ahịa.
Mee ka ụdị azụmahịa gị dị mfe.
Nye ndị magburu onwe mgbe-sales ọrụ.
Ngwaahịa na ọrụ kwesịrị ịbụ eze, ya mere na-enye ngwaahịa dị mma ma rụọ ọrụ karịrị asọmpi ahụ.
Jiri ngwa maka akụrụngwa, mmesho na nke na - akwalite nkwalite ịzụ ahịa ndị ọrụ.
Ngwaọrụ iji jigide ndị ahịa
Enwere ọtụtụ ngwaọrụ iji jide ndị ahịa Ha nweere onwe ha ma mepere emepe, ikekwe anyị amaghị ha niile yana ọ nwekwara ike ime na ndị anyị maara abụghị ndị kachasị mma, biko biko were ndepụta a maka naanị ntụnyere.
Anyị ekewapụtala ya dịka ụdị ngwaọrụ ahụ, ha dị na usoro dị iche iche nke ndị ahịa na-arụ ọrụ na Linux (Nwere ike ọgaghị adị maka ụfọdụ disros)
N'oge na-adịbeghị anya AnaGaby_Clau nyere anyị ezigbo nchịkọta nke Top 6 emeghe iyi CRM ngwaọrụ, ndị a ka anyị ga-agbakwunye Akwụkwọ ọnụahịa, Odoo, Mma na ụfọdụ ngwaọrụ ndị ọzọ na-eweta CRM modul nke nwere ọtụtụ ọrụ nke ngwa CRM pụrụ iche.
POS / EGO
Edere m otu isiokwu na nso nso a iji nyere aka họrọ sọftụwia adeudo maka ebe ị na-ere ere (POS / POS)), Ha bụ obere ntuziaka na ndụmọdụ anyị kwesịrị iburu n'uche ka nhọrọ anyị kacha bụrụ nke dabara adaba.
N'otu ụzọ ahụ, ogologo oge gara aga ka anyi jiri Linux ọ gwara anyị banyere Sọftụwia kachasị mma maka ebe a na-ere ere (POS / POS)N'ime ya, ọ nyere anyị ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwa ngwa ngwa ọzọ maka arụnyere na POS anyị.
na Ndị na-emepụta atụmatụ ọrụ Enterprise (ERP Enterprise Resource Planning), nwere ike ịrụ ọrụ dị mkpa na iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa, ebe ọ bụrụ na ndị a nwere ahịa, ahịa, modulu crm n'etiti ndị ọzọ, enwere ike itinye ya na usoro iguzosi ike n'ihe gị.
N'otu aka ahụ, ndị ọrụ na-eche na ha raara onwe ha nye ụlọ ọrụ ndị ahụ ebe a na-edozi otu ozi ahụ n'agbanyeghị oge ma ọ bụ onye ọrụ na-aga ya, na mgbakwunye, ERPs na-enye ohere ka ọ rụọ ọrụ nke ọma mgbe ị na-achịkwa ngwaahịa, ngwa ngwa, ịzụrụ na ahịa.
Enwere m ike ịkpọtụ na ụdị ERP, ngwaọrụ ndị a na - akwụ ụgwọ: Odoo, Idempiere, Adempiere, LibertyaERP, Weebụ, Nke ozo, Igwekota n'etiti ndị ọzọ.
Ngwaọrụ nke ahia kọmputa ma ọ bụ e-azụmahịaHa bụ onyinye bụ isi mgbe a bịara n'ịkwalite iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa n'ụdị azụmaahịa ụfọdụ, n'ihi na ọ nweghị onye bụ ihe nzuzo na n'oge a ndị SME ga-akụ nzọ na ịntanetị dị ka ikpo okwu ziri ezi iji merie nnukwu ụlọ ọrụ.
Gelọ ọrụ buru ibu na obere ga-eme ka ahụmịhe onye ọrụ mgbe ị na-azụ ihe n'ịntanetị, bụrụ otu ma ọ bụ ka mma karịa mgbe ha mere ya na ụlọ ahịa anụ ahụ.
N'otu aka ahụ, ugbu a ọ bụ mpụ azụmaahịa maka ndị ọrụ 2.0 ịga asọmpi maka enweghị akụrụngwa teknụzụ nke na-enye ha ohere ịzụrụ ma ọ bụ nweta nkwado zuru oke n'ịntanetị.
Fọdụ n'ime ndị isi ngwaọrụ Isi mmalite maka E-azụmahịa bụ: Magento, PrestaShop, osCommerce, OpenCart, Azụmahịa Spree n'etiti ndị ọzọ.
Na ikwubi, anyị ga-emechi na omenala Usoro maka ndị ahịa iguzosi ike n'ihe, na email-ahia, nke bụ usoro ndị ụdị jiri iji kpọtụrụ ndị na-ege ha ntị site na email. Usoro ịre ahịa email gụnyere akwụkwọ akụkọ na nzipu ozi, nke a ga-eme na-agbaso usoro intrusive dị ntakịrị yana ebumnuche akọwapụtara nke ọma.
E nwere ọtụtụ Open Source Email Marketing ngwaọrụ, na-egosipụta ihe ndị a: Mautic, Meghee, ndepụta, pim isi na ọtụtụ ndị ọzọ.
Mkpebi na iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa na ngwanrọ n'efu
Usoro nke iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa buru ibu, ihe dị mkpa yana karịa ihe niile dị mkpa, ọ bụkwa mpaghara ebe ị nwere ike itinye ego ma ọ bụ oge, ọ bụ ihe ziri ezi site na ego ndị ahịa na-abịaghachi na ndị ahịa na-abịa site na nkwanye.
Na mgbakwunye, ọ dịghị ihe dị mma karịa onye ahịa nwere obi ụtọ, ebe ọ na-enye mmetụta mmetụta mmetụta na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị, nke a ka m na-ekwu, na karịa uru akụ na ụba, ọ ga-enwerịrị ebumnuche ịmepụta ngwaahịa na ọrụ ndị na-egbo mkpa ndị ahịa, na-enye ọnọdụ niile dị mkpa maka onye ọrụ ahụmahụ bụ ihe kasị mma.
Anyị ga-enwe afọ ojuju na mpaghara sọftụwia n'efu, ebe enwere ọtụtụ ngwaọrụ dị maka usoro a dị mkpa maka azụmaahịa. M na-agba gị ume ka ị banye n'ime nke ọ bụla.
Enwere m olileanya na isiokwu a masịrị gị na ọ na - enye gị ohere ịnwe ike ijide ndị ahịa azụmaahịa gị n'ụzọ dabara adaba. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ma ọ bụ kwuo okwu, egbula oge ide anyị
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Etu esi ejigide ndi ahia na ngwanrọ n’efu
jet vegda dijo
Nwee ntụkwasị obi na ndị ahịa gị. Nye ọrụ pụrụ iche. Bido mmemme njide ndị ahịa.
1. Mejuputa usoro nzaghachi ndị ahịa.
2. Nọgide na-enwe kalenda nkwukọrịta ndị ahịa.
3. Ziga akwụkwọ akụkọ ụlọ ọrụ.
4. Bido mmemme agụmakwụkwọ ndị ahịa.
Ahụrụ m na ị nwere ọtụtụ free ERP Software kacha mma. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị? , mgbe ahụ gaa na: https://www.techimply.com/software/erp-software
Zaghachi ka jeet vegda
Ọdịnaya i kesara bara uru ma baa ezigbo uru. Obi oma kenye ndi ozo ndi ozo ERP akpan akpan.
Esi gbanwee agba agba ls na Linux